Usuku lokuqala lokuhamba ngesikebhe: izinto okufanele uzenze namathiphu awusizo | Izikebhe ze-Absolut
Usuku lokuqala lokuhamba ngesikebhe: izinto okufanele uzenze namathiphu awusizo
U-Ana Lopez | | Amathiphu, General
Manje usugibele kulowo mkhumbi omuhle futhi usukulungele noma usukulungele usuku lwakho lokuqala lokuhamba ngesikebhe. Kanjalo, Ngizokunikeza amacebo ukuze ungabonakali njenge-rookie ngosuku lwakho lokuqala. Futhi ngiqala ngalokho obekufanele ukwenze izolo, futhi lokho ngukuthi ngincoma lokho fika ethekwini usuku olulodwa ngaphambi kokuhamba komkhumbi, ukuthi uthathe ukuxhumana nesikhathi ukufika ethekwini. Lokhu kungaba wukuzilibazisa kwami, kepha kungaba yihlazo uma kokungalindelekile noma okuthile okungenangqondo ungafikanga emkhunjini ngesikhathi, futhi awulindi muntu.
Futhi uma sesingaphakathi futhi sesingenile sihamba namathiphu. Into yokuqala kimi hlangana nomuntu ophethe indawo yami yamakhabethe, uzoba isixhumanisi sakho esiqonde ngqo ukuthola ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini noma ucela noma yini oyidingayo, njengomunye umqamelo.
1 Imininingwane engizoyithola egumbini lami
2 Khipha usuku lokuqala
3 Ngabe ngiya noma angiyi emhlanganweni wezokuphepha?
4 Hlola isikebhe
Imininingwane engizoyithola egumbini lami
Ekamelweni lakho, lapho ufika, uzobona ukuthi unolwazi oluningi ngomkhumbi nangomkhumbi uqobo, izinto ezifana ukunikezwa, ukuvakasha, uhlelo lwansuku zonke lwemisebenzi esikebheni, izindawo zokudlela, imibukiso neminye imininingwane. Yibheke kahle, bese unquma. Mhlawumbe ufuna ukunweba uhambo noma bhuka manje endaweni yokudlela, manje yisikhathi sokwenza, ngoba lapho-ke kungenzeka kungabi khona izinqolobane ezisele.
Inkinga yokuthi ungazenzela yini uhambo noma uzibhuke ngaphambi noma phakathi nohambo yinto wonke umuntu anquma ngayo, kepha uma ikusiza lapha ungakwazi thinta indatshana ngendaba
Khipha usuku lokuqala
Ungahle ufike ekamelweni lakho futhi imithwalo yakho ingekho okwamanje, ungakhathazeki. Emahoreni ambalwa uzoba nayo emnyango. Ngikweluleka ngokuthi uma izikhwama zakho sezifikile avale zonke izingubo ukhohlwe ukuphinda azivule. Futhi isincomo, obekufanele ngabe ngikwenze ngaphambili, phatha isikhwama sokugoqa ngaphakathi kwepotimende ngazo zonke izipho nama-tidbits angenakugwenywa ekuthengeni ohambweni nasezitobhini.
Ngabe ngiya noma angiyi emhlanganweni wezokuphepha?
Lo mbuzo akufanele ubuzwe nokuthi, kufanele uhambe yebo noma yebo. I-drill ephuthumayo (i-drill yezokuphepha) kufanele yenziwe kuzo zonke izikebhe futhi bonke abagibeli kumele babe kuyo. Futhi ngincoma futhi ukuthi ukwenze ngokucophelela okukhulu. Ukuze wazi ukuthi kufanele uye kuphi kubhola noma esimeni esiphuthumayo kufanele ubheke ngaphakathi komnyango wegumbi.
Ukwenza i-drill, i-alamu izokhala, i-beep ngezikhathi, 1 ubude no-7 omfushane, Lesi yisikhathi sokuthi ugqoke isilondolozi sempilo yakho (esizoba sekhabetheni) uhambe ungagijimeli endaweni yomhlangano. Kuzoba nombukiso wokuthi ungasisebenzisa kanjani isilondolozi sokuphila. Qaphela, amakheshi awasebenzi uma i-alamu yemisindo ye-drill! Ngemuva kokubhola, ungajabulela u-100% wesikebhe sakho.
Usuku lokuqala futhi yisikhathi esihle sokuthatha uhambo ngesikebhe. Yize abantu abaningi bengazi, empeleni lolu "hambo" lungahlelelwa futhi yizisebenzi uqobo ezikufundisayo, futhi kwesinye isikhathi benza ama-raffle phakathi kwabantu abavakashela izikhungo ngosuku lokuqala, ngakho-ke ngubani owaziyo… ungathola isikhathi samahhala se-spa.
Uma uhamba nezingane bazokucela ukuthi uhlolisise yonke into, Iya ezikhungweni ezinikezelwe kubo, kungahle kube khona nabaqaphi, isikhathi esihle sokuhlangana nabo.
Ah! Ungakhohlwa ukuhlola uhlelo lwakho lokudla kanye netafula onikezwe lona ... ukuze ungangabazi ngokuhamba kwesikhathi. Futhi manje yebo, uhambo olujabulisayo!
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Usuku lokuqala lokuhamba ngesikebhe: izinto okufanele uzenze namathiphu awusizo
Ukuhamba ngezinyawo nezingane: imibuzo ebuzwa njalo namathiphu
Imisele ehle kakhulu yokuhamba emhlabeni